CIA-du qeyb ayay ka tahay mushkiladda Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya – Tan iyo markii uu soo baxay Qaraarka Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ee tirsigiisu yahay , 3 December 1992, ee ku saabsanaa xaaladda Soomaaliya iyo oggolaanshaha abuuritaanka Unified Task Force (UNITAF), Mareykanka ayaa ku asteysnaa daraf xooggan oo qeyb ka ah dhibaatada Soomaaliya.
December 9, 1992, Madaxweynihii Maraykanka ee xilligaas George H.W. Bush ayaa cutubyo ka tirsan ciidamadiisa u diray magaalada Muqdisho, si ay hormuud u noqdaan ciidamo caalami ah oo ujeedkoodu ahaa soo celinta nidaamka iyo kala dambeynta, dalka laga raacdeeyay kaligiis taliyihii waddanka burburiyay ee Maxamed Siyaad Barre.
Kadib markii Soomaaliya lagu dilay 24 askari oo ka socday Pakistan 1993, Qaramada Midoobay ayaa ogglaatay in la xiro General Maxamed Faarax Caydid, hayeeshee, Oktoobar 3, 1993, intii lagu guda jiray isku daygii lagu doonayay in lagu xiro General Maxamed, dagaalyahannadii Somali National Alliance (SNA), ayaa dhulka dhigay laba ka mid ah helikobtarrada Ciidanka Mareykanka ee Black Hawk waxayna dileen 18 askari oo Mareykan ah.
Ugu danbeyn ciidamadii nabad ilaalinta Qaramada Midoobay ee Mareykanku hor kacayay ayaa ka baxay Soomaaliya 1995-tii, Muqdisho oo aan lahayn dowlad shaqeysa, heshiis xabbad-joojin ah oo aan jirin ayay qulqulel, kadib markii ay khaarijeen kumannaan Soomaali ah.
Tan iyo xilligaas, Aqalka Cad, ee looga arrimo Mareykanka, ayaa qeyb kahaa carqaladda Siyaasadeed iyo midda amni ee dalka, hayeeshee, heshiiskii u jeedkiisu ahaa dhismaha ciidanka iyo hormarinta dhaqaalaha ee dhex maray Soomaaliya iyo Turkiga 10 sano ka hor, ayaa horseedday in Mareykanku mar kale dib ugu soo laabto dalka, gacantana ku dhigo qandaraaska dhismaha Ciidanka Kumaadooska Danab.
Ujeedka loo aasaasay Danab, ayaa ahayd in ay si joogta ah u fuliyaan weeraro ka dhan ah Kooxda Al-Shabaab, waana kumaandooskii ugu horraysay ee Soomaaliya ay yeelato tan iyo markii ay burburtay Dowladdii Kacaanka sannadkii 1991.
Hayeeshee, ciidamadaan waxaa si taban loogu adeegsaday howl-gallo ka dhan ah Ururro Siyaasadeed oo aan Al-Shabaab ahayn, sida dagaalladii dabayaaqadii bishii October ka dhacay Guriceel, kuwaas uu ku geeriyooday Allaha u naxariistee Gaashaanle Cabdiladiif Axmed Culusow [Feyfle] Taliyihii Ururka 6-aad, Guutada 16-aad ee Ciidanka Danab.
GALMUDUG, Ciidanka Kumaandooska Xoogga Dalka ee Danab, waxa ay la dagaallameen Koox diimeedka hubeysan ee Ahlusunna waljamaaa [ASWJ], kuwaas oo muddo dheer dagaal kula jiray Kooxda Al-Shabaab.
MUQDISHO, Waxa ay xilliyo kala duwan qeyb ka noqdeen falal lagu caburinayay bulshada Caasimadda, oo ay ugu horreeyen siyaasiyiinta mucaaradka, waxa ay saraakiisha Danab qeyb ka ahaayeen, ciidamadii isku dayay in ay xoog ku meel mariyaan muddo kordhintii April.
PUNTLAND, Ciidamada uu tababaray Mareykanka ee Puntland Security Force [PSF] waxay ay dhawaan ka hor yimaadeen qoraal ka soo baxay hay’adda fulinya, waxa ay soo banneeyeen difaacyada, waxayna u diyaar garoobeen dagaal ay ku galaan gudaha Boosaaso.
Iyadoo ay muuqdaan tallaabooyinkaas ka dhanka ah, u jeedkii loo aasaasay ciidamada Mareykanku tababaro, ma jirto, wax war ah uu ka soo saaray maamulka Aqalka Cad, waxaana muuqata in Mashruucii CIA-da ee Soomaaliya ee todobaatameeyadii uu wali dul-hoganayo dalka.
Sida ku cad, warbixin lagu daabacay The New York Times, Oct. 24, 2021, oo ciwaankeedu yahay [A C.I.A. Fighter, a Somali Bomb Maker, and a Faltering Shadow War] CIA-da Mareykanka, ayaa dadaal ugu jirta sidii ay uga fogaan lahayd duufaanta siyaasadeed ee ku hareeraysan saaxiibkooda muhiimka ah ee sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin.
Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, ayaa dib u dhigay doorashada dalka, taasoo u kordhisay muddo xileedkooda, dadka dhaliila waxa ay ku eedeeyeen in in ay si bareer ah awoodda u marooqsadeen, kooxaha ka soo horjeeda ayay rasaas isku weydaarsadeen bartamaha Muqdisho, taas oo keentay cabsida laga qabo in ay burburto dimoqraadiyadda daciifka ah ee muddada la yabyabayay.
Sida ay The New York Times, ku sheegtay warbixinta October Saraakiil Mareykanka ayaa soo jeedisay in la cunaqabateeyo Fahad Yasin si loogu qasbo inuu dalka ka hor wareego, sida ay sheegeen laba sarkaal oo reer galbeed ah, hayeeshee CIA-da ayaa si adag uga soo horjeestay fikraddaas, taas oo caddeyn u ah in ay qeyb ka yihiin caqabadda taagan.
CIA-du waxay si joogto ah u taageertaa dambiilayaasha, inkasta oo ay waxyeello u geystaan danaha Maraykanka ee muddada dheer. Waxay xoojisay dagaal oogayaashii Soomaaliya horaantii 2000, kuwaas oo shacabku si weyn uga soo horjeesteen, halka ay taageertay soo galitaankii dalka ee ciidamadii Itoboobiya, kuwaas oo xasuuq ka geystay Muqdisho iyo meelo kale oo waddanka ah.
Sida ay xoguhu caddeynayaan, kulan bishii April ee sanadkaan dhex maray ergeyga gaarka ah ee xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay James Christopher Swan, safiirkii hore ee Mareynka Donald Yamamoto iyo saraakil Mareykan ah, ayaa lagu go’aamiyay in Wasaaradda Arrimaha Dibadda [Department of State] soo saarto cunaqabateyn ka dhan ah Fahad Yaasiin iyo kooxda ka hooseysa hayeeshee, waxaa iyana si cad kaga hor yimid CIA-da Mareykanka.
Fahad Yaasiin, ayay dul-hoganayaan eedeymo la xariira khaalijinta saraakiil ka tirsanaa hay’adda nabad-sugidda NISA, halka ay Xeer-ilaalinta Ciidamada Qalabka Sida ay gacana ku heyso dacwo ka dhan ah oo la xariirta kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo ah sarkaalad ku maqan gacanta taliskiisa.
Tallabooyinkaas oo dhan waxa ay daaha ka qaadayaan in Mareykanka oo ka cagajiidayo xasillinta siyaasadeed iyo amni ee Soomaaliya, isla-markaana uu baasiin xaaladda ku sii bilbilayay ku dhawaad shanti sano ee la soo dhaafay.